VaZuma Vosangana neMatambudziko Mukugadzirisa Gakava reZimbabwe neNguva
Chikunguru 22, 2011
Nhumwa dzemutungamiri wenyika yeSouth Africa VaJacob Zuma, idzo dzange dziri munyika svondo rino dziri kuratidza kuti dziri kusangana nematambudziko makukutu mukuyedza kubuda negwaro rine gwara rakajeka rekuvandudza zvinhu muZimbabwe sezviri kudiwa nesangano reSADC parichaita musangano waro mwedzi unouya kuAngola.
Pane mashoko ekuti sangano reMedia Commission rakaramba kusangana nenhumwa idzi. Chipangamazano chaVaZuma, Muzvare Lindiwe Zulu vanoti havo vakangoudzwa kuti pane zvavanofanira kutevedzera vasati vasangano nesangano iri. Mapato maviri eMDC ari kugunu'una kuti mapepanhau nenhepfenyuro dzehurumende dziri kushandiswa mukunyomba neZanu-PF. Imwe nyaya iri kunetsa ndeyekuvandudzwa kwemashandiro emauto.
Muzvare Zulu vanoti nyaya iyi haina kukandwa mugango. Asi vamwe vakuru muMDC vanoti nyaya iyi zvikuru yaBrigadier General Douglas Nyikayaramba yekuti mutungamiri wehurumende VaMorgan Tsvangirai havafe vakatonga yakataurwa nezvayo. MDC inoti South Africa iri kutya kutaura nezvenyaya yemauto sezvo Zanu-PF iri kutsika madziro ichiti hapana anofanira kuitaura.
Vakuru vemauto vari kupika kuti VaTsvangirai kunyangwe vakahwina sarudzo havafe vakatonga.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika VaTrevor Maisiri vanoshanda nesangano reAfrica Reform Institute vanoti zvirinyore kuti ngamera ipinde muburi retsono pane kuti VaZuma vagadzirise dambudziko reZimbabwe.